Naqshadeynta Caaryada & Soo saarista - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co., Ltd.
Kooxda naqshadeynta caaryada waa furaha tikniyoolajiyada caagga ah & caagagga, dhammaan caaryada qaybaha caagga ah & qaybaha silikoon waxaa la qorsheeyay oo loogu talagalay kooxda naqshadeynta caaryada, waxaan kaa caawin karnaa inaad xalliso dhibaatooyin kala duwan oo caaryada ah haddii aad noo keento caag ama mashaariicda balaastikada ah.Qodobbada naqshadeynta caaryada:
Qaab dhismeedka caaryada ugu fiican si loo xaqiijiyo wax soo saarka waxtarka sare leh.
U hoggaansan shuruudaha sawirka, xakamaynta dulqaadka adag.
Ma laha khad toosan oo ku yaal meelaha muhiimka ah ee qaybaha caagga ah amasilikoonqaybo.
Qiimaha caaryada iyo nolosha caaryada.
Farsamada Habaynta Caaryada ee aadka u wanaagsan:
Chengda Rubber & Farsamayaqaannada farsamada caaga ah waxay leeyihiin tignoolajiyad heer sare ah oo soo saarista caaryada ah iyo hab-dhaqan dhab ah, waana sababta aan ugu wanagsanayno alaabada caagga ah ee caadiga ah iyo goobta wax soo saarka alaabada silikoon ee caadiga ah.
Inta badan farsamayaqaannada iyo shaqaaluhu waxay ka shaqeeyaan Chengda Rubber & Plastic sanado badan waxayna leeyihiin waayo-aragnimo qani ah oo ku saabsan samaynta caaryada, waxaan daryeelnaa dhammaan faahfaahinta yaryar ee farsamaynta, si loo hubiyo in la soo saaro caaryada saxda ah ee saxda ah iyo muddada dheer ee wax soo saarka caag ama caag ah.